'Kumele kucace uma nginendoda'-kusho abesifazane
UXWAYISA ngengozi yeGirlfriend Allowance emjolweni uNksz Zola Dudeni ongumeluleki wezothando, othe akumele ibe yimpoqo Isithombe: SITHUNYELWE
ZANELE MTHETHWA | September 4, 2019
KUNEHLAYA elisabalele ezinkundleni zokuxhumana elithi “zama imali yokuza ngizokunika eyokubuyela emuva.”
Leli hlaya limataniswa nabesilisa okuthiwa bajwayele ukuzincengela ngale ndlela uma becela ukuvakashelwa yintombi.
Yize lokhu kwenziwa ihlaya, baningi abesifazane abalindele ukuthi isoka kumele likhiphe imali ukukhombisa uthando.
Sekunetemu okuthiwa yiGirlfriend Allowance, okuyimali okulindeleke ukuthi isoka liyikhiphele intombi.
Akekho owazi isamba kodwa ngokujwayelekile kuba yimali yokujabulisa intombi noma eyokulungisa izinwele nezinzipho.
Ophenyweni olwenziwe yileli phephandaba kucacile ukuthi abesifazane abaningi balindele ukunikezwa imali emjolweni.
Abanye bathi iGirlfriend Allowance iyizithelo zothando ngoba ukuthandwa ngomlomo kuphela akwanele.
Owesifazane oneminyaka engu-35, ocele ukungadalulwa, uthe akasakwazi ukujola nendoda engeke imsize ngemali.
Uthe ngokwemvelo indoda kumele inakekele owesifazane nangokwemali.
“Kumele kucace uma nginendoda, ngingatabalasi ngedwa. Akudingi ngiyicele imali kodwa kumele indoda izibonele izidingo zami. Ngaphandle kokungikhipha, kumele kube nemadlana engizoyithola ezongibheka. Kuyenzeka uswele ngisho imali kaphethroli, uma unendoda enakekelayo iyakusiza kuleso simo,” kuchaza owesifazane osebenzayo.
Uthe akanaso isamba asifuna esokeni kodwa kumele kube imali ebhekile. UNksz Zola Dudeni oyiPsychologist engumeluleki wezothando, uthe iyinkinga indaba yeGirlfriend Allowance uma iphoqiwe.
Uthe kwakona ukuvela kwaleli temu kwakha isithombe sokuthi yimali eyimpoqo.
“Uthando aluthengwa kodwa konke okwenzekayo kusuka othandweni. Yize abesifazane bamanje sebetshelwa ukuthi kumele bazimele, kusenzima kwabanye ukukhipha umqondo wokuthi amadoda kumele abanikeze imali. Abanye bayifuna ngenkani le mali kube sengathi abathandwa uma ingakhishwa,” kuchaza uNksz Dudeni.
Uthe ngokujwayelekile abesifazane basebenzisa le mali ukuzicwala, okuyinto abangazenzela yona.
Uveze ukuthi ingozi yalokhu ukuthi indoda igcina ilawula intombi uma iyinikeza imali njalo.
“Kuyenzeka imali iphele othandweni ngenxa yesimo somnotho. Uma owesifazane ebesejwayele ukuphoqa ukunikwa imali, akube kusaba mnandi othandweni uma ingasekho.”
Oyisazi samasiko uMnuz Madoda Zungu, uthe lena akuyona indaba entsha.
Uthe kudala intombi esiqomile bekulindeleke ukuthi inakekelwe yisoka.
“Ibiphenduka ihlaya insizwa engakwazi ukunikeza intombi izidingo nentombi ibhuqwe ngokuthi iswele kanjani iqomile. Lokhu bekuyindlela yokukhombisa uthando. Bekuthi noma insizwa iya emcimbini ngakubo kwentombi, iphathe iminjonjo ukujabulisa osibali,” kusho uZungu.